पद जोगाउन सफल हुदै ओली, साझा प्रस्ताव बनाउन तयार भए प्रचण्ड !::Point Nepal
पद जोगाउन सफल हुदै ओली, साझा प्रस्ताव बनाउन तयार भए प्रचण्ड !
पद जो´गाउन सफल हुदै ओली, साझा प्रस्ताव बनाउन तयार भए प्रचण्ड !
काठमान्डौ – स´त्तारुढ दल नेकपामा श´क्ति स´ङ्घर्ष उत्कर्षमा पुगिरहेका बेला मङ्सिर २१ गते सुरु भएको छैठौँ स्थायी समिति बैठक एक साताका लागि स्थगित भएको छ । सदस्यहरूलाई दुई अध्यक्षका प्रतिवेदन लगायतका अन्य चिठी पत्र र सवालजबाफको मिहीन अध्ययन गर्न एक साताको समय छुट्याइएको छ ।
शीर्ष नेताहरूबीच औ´पचारिक अ´नौपचारिक संवाद र छलफल गर्न सहयोग पुग्ने उद्देश्यसहित डकुमेन्ट अध्ययनका नाममा स्थायी समिति एक साता लामो समय स्थगित गरिएको हो । प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भौतिक अनुपस्थितिमै आइतबार बसेको बैठकमा पत्रमार्फत उनले आफू अनुपस्थित हुनुको कारण खुलाएका मात्रै छैनन् ।
उनले कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रस्तावले पार्टीभित्र स्वस्थ र म´र्यादित छलफलको सीमा भत्काएर नीतिगत बहसलाई शत्रुतापूर्ण अन्तरविरोधमा पुर्याएको भन्दै आ´रोपपत्र फिर्ता नभए आगामी मङ्सिर २८ गते बस्ने बैठकमा समेत नआउने सङ्केत गरिसकेका छन् । प्रचण्डको प्रस्ताव फिर्ता भए मात्रै बैठकमा आउने ओलीको भनाइप्रति प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष भने सहमत हुन सकेका छैनन् ।
यता स्थायी समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले दुवैजनाको प्रस्तावमा छलफल गरेर निकास निकाल्न सकिने सङ्केत पनि गरेका छन् ।
‘प्रस्ताव फिर्ता लिऔँ भनेर मात्र हुन्छ रु यो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै सार्वजनिक बहसको विषय भइसक्यो’, प्रचण्डको भनाइ छ । खासगरी ओलीले भदौ २६ को स्थायी समितिको नि´र्णय कार्यान्वयन नगरेपछि नेकपामा समस्या सिर्जना भएको थियो ।
त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, राजदूत नियुक्ति, कर्णालीमा मुख्यमन्त्रीवि´रुद्धको अविश्वास प्रस्तावपछि विकसित घ´टनाक्रम, पर्सामा पार्टी जिल्ला सदस्यको ह´त्या र को´भिडका विषयमा छलफल गर्न बैठक माग गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले असहमति जनाएका थिए । जसले गर्दा पार्टीमा एकपछि अर्को समस्या थपिँदै जाँदा दुई अध्यक्षबीच आरोप प्रत्यारोप नै चल्न पुगेपछि मङ्सिर २१ बाट सुरु स्थायी समितिमा समेत उनी सहभागी बनेन् ।
स्थायी समितिलाई ‘र´त्यौली’ को संज्ञा
यसअघि मङ्सिर १३ गते ओलीले सचिवालयमा पेश गरेको जबाफी प्रस्ताव र २१ गतेको स्थायी समितिमा पठाएको सन्देशमा ओेलीले आफू अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट राजीनामा नदिने घोषणा गरेका छन् । यही क्रममा ओलीको प्रतिवेदनमा आफू नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व ह´स्तान्तरण गर्न तयार रहेको भन्दै अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि तपाई तयार हुनुहुन्छ भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
ओलीको यो प्रश्नप्रति जबाफ दिँदै प्रचण्डले स्थायी समिति बैठकमा आफू पनि त्याग गर्न तयार रहेको बताएका छन् । ‘देशमा आएका परिवर्तन जो´गाउने सन्दर्भमा हाम्रा पद ठूला कुरा होइनन् । अहिले एकताको विकल्प पनि छैन, हाम्रा लागि पदभन्दा ठूलो गणतन्त्र, स´ङ्घीयता र पार्टी एकता हो । त्यसको रक्षाका लागि जोकोहीले पनि त्याग गर्न तयार हुनुपर्छ । म पनि तयार छु’, अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ छ ।
ओलीको वि´कल्प खोज्नु बिजुली सट्टा अ´गुल्टो
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोज्नु भनेको बिजुलीको सट्टा अ´गुल्टो खोज्नुजस्तै भएको बताएका छन् । उदिपुर–रि´ठ्ठेवगर–रामचोकबेसी–नौथरबेँसी–शेरा कालोपत्र सडकको बेँसीशहर नगरपालिका–११ चितीमा मङ्गलबार शिलान्यास कार्यक्रममा उनले ए´कीकृत कम्युनिष्ट पार्टी निर्माणको यो अभियानमा दुई अध्यक्षको महत्वपूर्ण योगदान रहेकाले उनीहरुको संवाद र सहकार्य अ´परिहार्य रहेकाले यतिबेला सरकार गिराउने र पार्टी अध्यक्ष परिवर्तन गर्ने समय नरहेको बताए।
नेकपा स्थायी कमिटीका सदस्यसमेत रहेका गुरुङले भने,“यो सरकारलाई जनताले पाँच वर्षका लागि जनादेश दिएका छन्, पार्टी अध्यक्ष हुने हो भने महाधिवेशनसम्म पर्खनुपर्छ। पार्टी एकताको मर्म भनेको अल्पमत र बहुमतको खेल खेल्न होइन।” मुख्यमन्त्री गुरुङले एकताको मर्म भनेको दुई अध्यक्षले बैठकको एजेण्डा तय गरी सहकार्य र सहमतिमा अघि बढ्दै पार्टी एकताका बाँकी काम सम्पन्न गरी महाधिवेशन गर्नुपर्ने बताए।
गुरुङले भने,“यो समय प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा र प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डको राजीनामा माग्ने बेला होइन, एकले अर्कालाई आरोप लगाउने अधिकार पनि छैन।” नेता गुरुङले अध्यक्ष बन्न मन लागे चार महिना पर्खने धैर्य गर्नुपर्ने भन्दै सरकार भने पूरा अवधि रहने बताए।
“जनताको जनादेश पाँच वर्षका लागि स्थायी सरकार हो। सरकारले अहिलेसम्म कुनै सरकार र प्रधानमन्त्रीले गर्न नसकेको काम गरेको छ। यो सरकार पाँच वर्ष टिक्छ। राजीनामा माग्नु जनमतको जनादेशविपरीत हुन्छ। जहाँसम्म पार्टी अध्यक्षको कुरा छ त्यो महाधिवेशनले तय गर्छ”, उनले भने।